Yuunvarsiitin Finfinnee hayyoota 6n eenyufaadhafi proofeesarummaa guurtuu kan laate? – Fana Broadcasting Corporate
Yuunvarsiitin Finfinnee hayyoota 6n eenyufaadhafi proofeesarummaa guurtuu kan laate?
Finfinnee, Amajjii 28,2011(FBC)- Yuunvarsiitin Finfinnee hayyoota 6n eenyufaadhafi proofeesarummaa guurtuu kan laate?
1. Proofeesar Mararaa Guddinaa;
Digrii jalqabaa Yuunvarsiitii Finfinneerraa Saayinsii Siyaasaatin, digrii lammaffaa Ameerikaan Yuunvarsiitii In Kaayroorraa, Dooktareetummaa Inistiitiyuut Of Sooshaal Stadiisirraa argataniiru,
Qorannoowwan 12 ol dhuunfaa fi hiriyoota isaanii waliin barruulee biyya keessaa fi alaarratti maxxansiisaniiru.
Proofeesar Mararaan Yuunvarsiitii Finfinnee muummee Saayinsii Siyaasaa fi Qunnamtii Idil Addunyaa keessatti barsiisummaan tajaajilaa jiru.
2. Proofeesar Hiiruut Waldamaariyaam; digrii jalqabaatii amma dooktareetaatti Yuunvarsiitii Finfinneerraa qorannaa afaanitiin argataniiru.
Waraqaalee qorannaa 6 ol dhuunfaa fi hiriyoota isaanii waliin barruulee addunyaa fi biyya keessaarratti maxxansiisaniiru.
3. Proofeesar Tafarii Gadif digrii jalqabaa fi 2ffaa faarmaasidhaan Yuunvarsiitii Finfinneetii, dooktareetummaa isaanii Yuunvarsiitii Maartiin Luutar,Jarmanii argataniiru. Waraqaalee qorannaa 20 ol hiriyootaa fi dhuunfaa isaanitiin barruulee biyyoota alaa fi biyya keessaarratti maxxansiisaniiru.
4. Proofeesar Miruuts Giday; digrii jalqabaa Yuunvarsiitii Finfinneerraa baayoloojiidhan, digrii lammaffaa Yuunvarsiitii Sweediish Agrikaalcharaal Saayinsirraa baayoodaayvarsiitidhaan, dooktareetummaa Yuunvarsiitii Finfinneerraa bootaanikaal saayinsiidhan argataniiru.
Waraqaalee qorannaa 18 ol barruulee biyya keessaa fi alaarratti dhuunfaa fi hiriyoota isaanii waliin maxxansiisaniiru.
5.Proofeesar Haagoos Ashannaafii; yaala beelladaatin Yuunvarsiitii Finfinneerraa digrii jalqabaa fi lammaffaa argataniiru. Dooktareetummaa isaaniimmoo Yuunvarsiitii Beeljiyamitti argamu Kaatoliik Yuunvarsiitii of Leewvan irraa argataniiru. Dhuunfaa fi hiriyoota isaanii waliin qorannoowwan 24 ol maxxansiisaniiru.
6. Proofeesar Geetaachaw Asaffaa; yaala namaatin Yuunvarsiitii Finfinneerraa digrii jalqabaa, raadiyooloojidhaan achumaa digrii lammaffaa, Meedikaal Yuunvarsiitii Veenaa, Oostiriyaarraa niiwrooloojidhaan dooktareeta argataniiru.
Qorannoowwan 17 ol dhuunfaa fi hiriyoota isaanii waliin maxxansiisaniiru.
Yuunvarsiitiin Finfinnee obbo Tawaldaa fi Haji Muuftii Sheeh Umar Idriisifi…
Nyaanni madaalamaan dhukkuba onnee ittisuuf
Dubartiin ulfaatina kiiloo giraama 130 dorgommii miidhaginaa injifatte
Aadaan dubbisuu dargaggootaa akka gabbatu hojjetamuu qaba jedhame
Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa FDRI manneen waliin…
Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee baajatni bara 2012…
Finfinneen invastimantii hooteela magaalichaa guddisuuf…